नेपाल आयल निगमले मुलुकभर युरो – ६ मापदण्डको इन्धन विक्री वितरण वि।सं। २०७६ चैतदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । युरो–४ इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट बढी मात्रामा सल्फरडाइ अक्साइड उत्पन्न हुने गर्छ, जसले अम्लीय वर्षालगायतका वातावरणीय प्रभाव पार्दछ । युरो–६ मापदण्डको इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट कम मात्रामा सल्फरडाइ अक्साइड उत्पन्न हुन्छ र अम्लीय वर्षा लगायतका वातावरणीय प्रभाव न्यून हुन्छ । युरो–६ मापदण्डको इन्धनमा सल्फरको मात्रा १० पीपीएम तथा युरो ४ मा ५० पीपीएम हुन्छ । नेपाल आयल निगमले २०७६ माघदेखि नै युरो–६ मापदण्डको इन्धन आयात गरेको र सो इन्धन अहिले परीक्षणको क्रममा रहेको बताइएको छ ।
अस्ट्रेलियामा सम्पन्न टी– २० महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियाले जित्यो। भारतलाई ८५ रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले उपाधि रक्षा गरेको थियो । हालसम्म टी– २० महिला विश्वकपका सात संस्करणमा अस्ट्रेलियाले मात्र पाँचपटक उपाधि जितेको हो । अस्ट्रेलिया बाहेक इङ्ग्ल्याण्ड र वेस्ट इन्डिजले मात्रै एक–एक उपाधि जितेका  थिए। रिराइटेबल पेपरको विकास चीनका वैज्ञानिकले गरेका हुन् । सन् २०१८ मा यसको विकास गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना वि।सं। २०७५ मङ्सिर ११देखि सुरु गरेको हो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने घोषणा वि।सं। २०७५ मङ्सिर ११ गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रमको अवसरमा सो दिवस मनाउने घोषणा गरिएको । वि।सं। २०७५ मङ्सिर ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।
विश्वमै पहिलोपटक स्पेस एलिभेटर लिफ्टको परीक्षण जापानले सन् २०१८ मा गरेको हो । हाल निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व २५।७६ छ । आ।व २०६७÷६८ मा १३।८४ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व आ.ब. २०७५÷७६ मा २५.७६ प्रतिशत पुगेको थियो । निजामती किताबखानाका अनुसार आ.ब. २०६७÷६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ६७ हजार ७५ कर्मचारीमध्ये दश हजार ७७३ जना महिला रहेका छन्।
हाल ८६ हजार ८०० कर्मचारीमध्ये २२ हजार ३५९ जना महिला रहेका छन्। समावेशीको व्यवस्था लागू भएपछि निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको हो । राज्य सञ्चालनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०६४ मा समावेशीको व्यवस्था गरे बमोजिम आ।व। २०६६÷६७ देखि निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्था लागू भएको थियो । जसले खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत कोटा महिलाका लागि सुरक्षित गरेको थियो। निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढे तापनि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने महिलाको सङ्ख्या न्यून नै रहेको छ।
सन् २०२० मार्चमा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्व लक्ष्मणदत्त पन्त हुनुहुन्छ । बहुमूल्य धातु सुनलाई निक्षेपका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्रबैङ्कले वि.सं. २०७६ फागुन २२ गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाबमोजिम अब लकरमा राखिएको सुनलाई निक्षेपका रूपमा समेत राख्न पाइने भएको छ।निक्षेप गरिएको सुनवापत ब्याजसमेत पाइने भएको छ। सरकारले आ।ब २०७६÷७७ को बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले सम्पत्तिका रूपमा आर्जन गरेको सुनचाँदी लगायत बहुमूल्य धातु बैङ्कमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
जसअनुसार सुनलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार न्यूनतम २५ ग्राम सुनलाई निक्षेपको रूपमा राख्न सकिने ।ग्राहकले न्यूनतम तीन वर्षदेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्मका लागि सुन राख्न पाउने र त्यसलाई नवीकरणसमेत गर्न सकिने भएको छ। बैङ्कमा निक्षेप राखेको सुनको प्रमाणपत्रलाई सोही बैङ्कमा धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पनि लिन सकिनेछ  । यो व्यवस्था गहना सुनमा नभई ढिक्का सुन वा विदेशबाट फर्कने व्यक्तिले भन्सारमा कर तिरेर ल्याएको कच्चा सुनका लागि गरिएको हो।
राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार ९२०७६० साहित्यकार गणेश रसिकलाई प्रदान गरियो । उक्तपुरस्कार राशिः एक लाख रहेको छ । सङ्गीतका वरिष्ठ साधक प्रेमध्वज प्रधानलाई राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, स–सिद्ध राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार ९राशि ः ७५ हजाररहेको छ । सर्जक सरस्वती प्रतीक्षालाई बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । राशि ५० हजार रहेको छ । सर्जक रोचक घिमिरेलाई, पद्मनेत्र राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार प्रदान गरियो राशि २५ हजार रहेको छ । शिशिर योगीलाई र थिरछाया राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार प्रदान गरिउो । राशि २५ हजाररहेको छ। कलाकार विक्रम श्रीलाई प्रदान गरिएको छ।
देउकेटा प्रथा दैलेख छ ।आफ्ना कुलदेवतालाई खुसी पार्न सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरमा कुमार केटा चढाउने प्रथा देउकेटा हो । विवाह नगरुन्जेलसम्म मन्दिरको पूजाआजा गर्ने र मन्दिरको सरसफाइ तथा हेरचाह गर्नका लागि देउकोटा राख्ने चलन छ । कुमार केटाले पूजाआजा गरेपछि आफ्नो परिवारका साथै दर्शनार्थीलाई समेत राम्रो हुने विश्वास छ । कुमार केटालाई विधिपूर्वक व्रतबन्ध गराएर देउकेटाका रूपमा राख्ने गरिन्छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन हालै नेपालमा सन् २०२० मार्चमा सम्पन्न भयो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको ४५औँ सम्मेलनमा तीनसय विदेशी पाहुनासहित चार सयको सहभागिता रहेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सौर्य विद्युत् आयोजना नुवाकोट छ । यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता २५ मेगावाट रहेको छ । सो आयोजनाबाट १५ मे.वा. विद्युत् २०७७ वैशाखसम्ममा उत्पादन भइसक्ने र बाँकी १० मे।वा।को लागि पनि सोलार प्यानलको जडान कार्य अघि बढेको जनाइएको छ। नुवाकोटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको जग्गामा राखिएका सोलार प्यानलमार्फत उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने मुलुकमा नेपाल चौथोऔँ स्थानमा छ । सन् २०२० जनवरीदेखि नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ । यसअघि नेपाल पाँचौँ स्थानमा थियो । शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुकहरूमा नेपालभन्दा अगाडि इथियोपिया, बङ्गलादेश र रुवान्डा रहेका छ । नेपालपछि पाँचौँ नम्बरमा भारत र छैटौँ नम्बरमा पाकिस्तान रहेका छन्। शान्ति स्थापनाका लागि हाल विश्वका एक सय २२ देशबाट सुरक्षाकर्मीले भाग लिँदै आइरहेका छन्। हाल युएनको शान्ति स्थापना कार्यका लागि विभिन्न १२ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली कन्टिन्जेन्ट, सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृत गरी पाँच हजार ६५८ ९नेपाली सेनाका पाँच हजार ९६ जना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका ५६२ जना० सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहेका छन्। नेपालले पहिलोपटक सन् १९५८ मा युएन पर्यवेक्षक समूहको रूपमा लेबनान मिसनमा सहभागिता जनाएको छ।
हाल ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं औषधि खर्चवापत मासिक दुई हजार रकम प्रदान गर्ने गरिएको छ ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार र औषधि उपचार खर्च एक हजार प्रदान ग।िदै आएको छ । द्रव्य शाहले गोरखा राज्यको स्थापना वि।सं। १६१६ भदौ २५ गते गरेका थिए। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कार्यालय अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गर्ने भएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत नीतिमार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । नेपालले नयाँ संविधानमार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा नै अङ्गीकार गरेको छ ।
‘एजेण्डा फर डेभलप्मेन्ट ’ नामक विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव डा। बुत्रोस बुत्रोस घाली हुन् भने सुधारसम्बन्धी क्वाइट रिभोल्युसन नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने महासचिव कोफी अन्नान हुन् । शरणार्थी र आप्रवासीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन पहिलोपटक सन् २०१६ सेप्टेम्बर १९आयोजना गरियो। जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भिœयाउन अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फण्डलाई हेजिङ फन्ड भनी चिनिन्छ । फन्डको स्थापनापछि विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम यही फन्डमार्फत व्यहोरिने । फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने, वनक्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नका लागि पेश भएको प्रस्तावउपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पू्रक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ । चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तु वा अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्नेसम्मको क्षेत्रलाई चुम्बकीय क्षेत्र भनिन्छ । शक्तिशाली चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र ठूलो र कमजोर क्षेत्र सानो हुन्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा वि। सं। २००२ असोज १देखि प्रचलनमा ल्याइएको हो । नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी वि।सं। २००२ असोज १ देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए । पहिलोपटक रु। एक सय, रु। १० र रु। पाँच दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो ।
सदर मुलुकीखानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजाञ्ची जनकराज थिए ।
पहिलोपटक कुसुन्डा भाषाको पढाइ औपचारिक रूपमा लमही दाङमा सुरु गरिएको छ । चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले वि।सं। २०७४ जेठ ४ स्वीकृत गरेको हो। नाराः चुरेको पानी चुरेलाई, स्वच्छ पानी । सबैलाई प्रसिद्ध भाजुपोखरी भक्तपुर छ । भक्तपुर १२औँ शताब्दीमा निर्माण भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था सन् १९९८देखि गरिएको हो । राष्ट्रसङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानडाका लुइस फ्रेसेट ९सन् १९९८–२००६० हुन् । हाल राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका अमिना जे। मोहम्मद रहेका छन् । ‘तेक्वान्दो क्विन’ का नामक चिनिने नेपाली खेलाडी संगिना बैद्य हुन् । युरोपेली सङ्घको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्स छ । विश्व वन्यजन्तु कोषको प्रधान कार्यालय स्वीट्जरल्यान्ड छ ।बुधबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
लोकसेवा आयोगले खुलायो ६३८ पदमा विज्ञापन